Nokuba ungumnini wevenkile ye-eCommerce okanye ibhlog you-spiring, in ekuphela kwayo zonke iwebhusayithi zinokusetyenziswa kokubhaliweyo kwimixholo. Ukubeka ingcinga kwisicatshulwa sakho esibonisiweyo (okanye uyilo lochwethezo) akubalulekanga xa Ukudala ubuhle bendawo yakho kunye nokuqinisekisa impumelelo.
Nantsi into, unokuba nethemplethi eyoyikisayo ye-WordPress okanye ubeke imifanekiso enomdla kwiwebhusayithi yakho NANGONA kunjalo ukuba usebenzisa ifonti esisiseko engafundekiyo (okanye okubi kakhulu kwi-Comic Sans!), Uhai.
Kwaye, ulahlekile kubuhle be-typographics julle-pragtige web efumaneka kwi-Intanethi.
Ngethuba le-25 lewebhu ekhuselekileyo yefayili, uya kuqiniseka ukuba unobumba be-web tipografie ebalulekileyo kwiwebhusayithi yakho esebenza lonke ixesha, ekupheleni kweli nqaku!
1 Yintoni i-Web Safe lettertipe?
1.2 Ngaba kufuneka ndisebenzise i-Web Veilige lettertipes kwiWebhusayithi yam?
2 I-25 I-Web webwerf Veilig Veilig kwiWebhusayithi Yakho
2.6 11. Nuwe koerier
Yintoni i-Web Safe lettertipe?
Uninzi weekweek rekenaar Kunye neziphequluli zewebhu ziza kunye nesethi yamagama afakwe ngaphambili ngabavelisi, nangona kunjalo, izixhobo zabo (kwaye ngokuqhelekileyo) ziyahluka. Kwakungekho umgangatho osemgangathweni owenziwe ngabo bonke abavelisi abahlukeneyo.
Ngaba kufuneka ndisebenzise i-Web Veilige lettertipes kwiWebhusayithi yam?
Ukuba ufuna ukugcina ek-merk kunye nebonakalayo julle-webwerf yakho iyavumelana, ngoko usebenzisa ifayile ekhuselekileyo yewebhu ukuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho ibonakala ngokuqinisekileyo njengoko uzimisele ukuba yuba.
Enyanisweni, phantse yonke i-website namhlanje isebenzisa uhlobo oluthile lwefonti ephephile. Abaqulunqi bewebhu baya kuhlala becebisa ukukhetha ifayile ekhuselekileyo yewebhu ukwenzela ukuba ugweme ukuba nefonti eziqhelekileyo, njenge-Times New Roman, ibonakale xa abasebenzisi bavakashela iwebhusayithi yakho ukuba buzaye loo.
Kukho iindlela ongayisebenzisa ukuzongeza la maxwebhu kwiphepha lakho lewebhu, kodwa ukuba awukho kwiprogram okanye unamava angama-technoloji, unokwenza ngokukhawuleza ukukopisha ikhowudi eyi-CSS enobumba kwaye unamathe ngqisa zebi.
Yithwala ifayile yakho julle header.php
I-25 I-Web webwerf Veilig Veilig kwiWebhusayithi Yakho
11. Nuwe koerier